Sale Admin at MFunctions Myanmar Company Limited | MyJobs
Work Place: Yangon, Myanmar
Industry: Sales/ Business, Retail / Wholesale
Number recruit: 01
· Support sales, reporting and follow direct instructions from Sales Director.
· Check KPIs by specific ares;
· Check Sales out/ Document;
· Support tasks for ASMs;
· Import daily sales data reports to check for Distribution Sale Managerment department;
· Prepare contracts/ contract appendix/ liquidation/ other document;
· Do customer service tasks;
· Prepare documents to support manager registering, promotion programs;
· Make all the job set by Sales department. Submit regular reports to BOD and company
· Do other jobs under the direction of the Sales Director
· Working time: From Monday to Saturday morning
· Bachelor in Economic, Accounting or relevant fields.
· Age: 22 Years above
· Experience in related job scope isaplus point
· Well organized, friendly and polite, self- motivated
· Passionate, proactie at work
· Team work spirits
· Computer skills: Good ms office skills
· On job training provided
· Professional and dynamic working environment
· Holidays: Annual leave according to law
· Career pathway in company
· Allowance: Lunch
IV. MORE INFORMATIONS
· Curriculum vitae photo
· ID Card photo
No.3B, Sayone Street, 16 Quarter, Yankin District, Yangon City, Myanmar
Ms. Hai – 0966.012.7555
Ms. Thao – 096.95.33.66.99
· အရောင်းညွှန်ကြားမှု၏တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်များကိုရောင်းချခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းနှင့်လိုက်နာခြင်း။
· KPI များကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာများဖြင့်စစ်ဆေးပါ။
· အရောင်း / စာရွက်စာတမ်း စမ်းစစ်ခြင်း
· ASM များအတွက်ပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းများ၊
· Distribution Sale Managerment ဌာနကိုစစ်ဆေးရန်နေ့စဉ်ရောင်းအားအချက်အလက်များကိုတင်သွင်းပါ။
· စာချုပ်များ၊ စာချုပ်နောက်ဆက်တွဲ / ဖျက်သိမ်းခြင်း / အခြားစာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ပါ။
· မန်နေဂျာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များကိုအထောက်အကူပြုရန်စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ပါ။
· အရောင်းဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောအလုပ်အားလုံးကိုလုပ်ပါ။ BOD နှင့်ကုမ္ပဏီသို့ပုံမှန်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းပါ
· စီးပွားရေး၊ စာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင်ဘွဲ့ရှိသည်။
· အသက် - ၂၂ နှစ်အထက်
· ကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားခြင်း၊ ဖော်ရွေပြီးယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတတ်ရမည်
•ပညာရှင်ဆန်ပြီးတက်ကြွသောအလုပ်လုပ်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်
•အားလပ်ရက်များ - ဥပဒေအရနှစ်စဉ်ခွင့်ရက်
•ထောက်ပံ့ကြေး - နေ့လည်စာ
• ID Card ဓာတ်ပုံ